अब मकै पोले र भैँसी बेचे पनि कर ! - Everest Dainik - News from Nepal
अब मकै पोले र भैँसी बेचे पनि कर !
रुपन्देही, साउन ३१ । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले हाटबजारमा मकै पोलेर बेच्नेसँग दिनको ४५ रुपैयाँ कर उठाउन थालेको छ । यसैगरी, हाँस, कुखुरा र परेवामा प्रतिगोटा १६ रुपैयाँसम्म कर तोकेको छ । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
खुद्रा तरकारी व्यापारीलाई वार्षिक १२ सय र ठेलामा फलफूल बिक्री गर्नेलाई १५ सय कर तोकेको छ । डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाका किसानले भैँसी बेच्दा एक हजार कर तिर्नुपर्ने भएको छ । खसी बेच्नेले डेढ सय कर बुझाउनुपर्छ । नगरपालिकाले पशु करलगायत विभिन्न शीर्षकमा ४५ प्रकारका कर लगाएको छ ।
याे पनि पढ्नुस गृहमन्त्रीको ठाडो आदेशमा छोरी कुट्ने बाबु पक्राउ, उजुरी नलिने प्रहरी कारवाहीमा
ट्याग्स: Bhaisi, kar, Makai, Rupandehi